बच्चाहरूको स्क्रीन टाईम घटाऔँ, Hands-on क्रियाकलाप बढाऔँ। – Karkhana
बच्चाहरूको स्क्रीन टाईम घटाऔँ, Hands-on क्रियाकलाप बढाऔँ।
अहिले बच्चाहरूको सम्पूर्ण पुस्ता स्मार्टफोन, ट्याब्लेटहरू, र अन्य इन्टरनेट सक्षम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणहरूको साथ बढ्दैछ। यसका कारण धेरै अभिभावक चिन्तित छन्। त्यसैले हामी घरमै सजिलै गर्न सकिने पाँच सजिला hands-on क्रियाकलाप लिएर आएकाछौँ :
१. कागजको प्लेन र फिरफिरे:
आफ्ना नानीबाबुहरूलाइ कागजको प्रयोग गरेर विभिन्न प्रकारका प्लेन र फिरफिरे बनाउन दिनुहोस्। विभिन्न डिजाइन र उडान क्षमताका प्लेनहरू बनाउने प्रक्रियाहरू इन्टरनेटमा खोजेर पनि बनाउन सकिन्छ। कारखानाको वेबसाइटमा गएर पनि लुप ग्लाईडर कसरी बनाउने सिक्न सकिन्छ
यसबाट सिक्न सक्ने पाठहरू:
गणितका कोणहरु र त्रिकोणहरूको प्रकार र नाप
उडान सम्बन्धि सिद्धांतहरू
चरा र माछाहरुको बिशेष आकार हुनुको पछाडीका कारणहरू
२. कार्ड र डाइस प्रयोग गरेर गणितका खेलहरू:
विभिन्न खेल्ने कार्ड र लुडोको डाइस प्रयोग गरेर गणितका खेलहरु खेल्न सकिन्छ। गुणन फल (Multiplication table) याद गर्ने पनि खेलहरु खेल्न सकिन्छ।
जोड घटाउ का खेलहरू
गुणन फल सम्बन्धि खेलहरु
Fraction संग सम्बन्धित खेलहरू
३. पाँच इन्द्रिय खेल:
यो सजिलो र धेरै समान प्रयोग नहुने तर रमाइलो क्रियाकलाप हो। नानीबाबुहरूलाइ घरभरि घुमेर आफ्ना पाँच इन्द्रियले महसुस (देखेको कुरा, सुघेको बास्ना, स्वाद लिनसक्ने कुरा, छोएर महसुस गरेको कुरा, सुनेको आवाज) गर्न सक्ने ४ ४ वटा बस्तुहरु खोज्न लागाउनुहोस् र सो वस्तुहरुको नाम कापीमा लेखेर ल्याउन लगाउनुहोस्। यसलाई विभिन्न पाठमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
गणितमा गणना गर्न र समूह बनाउन
बिज्ञानमा इन्द्रियहरूको बारे बुझ्न र बस्तुहरुलाई विभिन्न प्रकारमा विभाजन गर्न
भाषामा आफुले महसुस गरेका अनुभवलाई ब्यक्त गर्न, विभिन्न नाम, र विशेषणहरु बुझ्न
सामाजिक शिक्षामा आफ्नो वरिपरिको बातावरणको बारेमा बुझ्न
४. अन्तर्वार्ता लिने:
नानीबाबुहरूलाई आफैले प्रश्नहरु बनाएर घरका सदस्यको अन्तर्वार्ता लिन लगाउनुहोस र सो अन्तर्वार्ताको बारेमा प्रस्तुति दिन लगाउनुहोस्। यो सरल तथा रमाइलो क्रियाकलापबाट उनीहरुको र घरका सदस्यको सम्बन्ध झनै गाढा हुन्छ भने उनीहरुले विभिन्न सिप प्रयोग पनि गर्छन।
भाषा अध्ययनमा आफ्ना प्रश्नहरु तयार गरेर अन्तर्वार्ता लिएर त्यसको प्रस्तुति दिन
सामाजिक शिक्षामा आफ्ना परिवारको सदस्यको जीवनशैलीको बारेमा बुझ्न
५. फोहोरबाट खेलौना:
घरमा भएका पुराना खेलौनाहरु र सकिएका ब्याट्री, रबर, पानीको बोतल जस्ता सामाग्री प्रयोग गरेर केहि सिर्जनशील बनाउने र आफुले बनाएको कुरालाई प्रस्तुत गर्ने। यो बनाउदा केही औजारहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने खण्डमा सहयोग गरिदिनुहोला र उनीहरुले बनाएका कुरालाई सकारात्मक टिप्पणी दिएर हौसला दिनुहोला।
कारखाना अभिभावक अन्तर्वार्ता संग्रह Karkhana Parents Interview Collection
Karkhana Computing Session on Tackling Disinformation